जानुका खतिवडा - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २४, २०७५
नौबज्न लागेको थियो  । आमा अफिसका लागि हतारिँदै हुनुहुन्थ्यो  ।
मंसिर ९, २०७५
स्कुल छुट्नासाथ उपासना र अग्रज गेटतिर दौडिए । हजुरआमा अघि नै आएर कुरिरहनुभएको रहेछ । दुवै नातिनातिना डोर्‍याउँदै उहाँ घरतिर फर्किनुभयो । घर पुगेपछि हातगोडा धोएर उनीहरूले खाजा खाए अनि केही बेर खेल्न थाले ।
स्कुलमा बर्खे बिदा चलिरहेकोले गोपी र सान्नानी घरमै बसेका थिए । आफ्नो घरमा रोपाइँ चलेका बेला त यसरी फुर्सदले बस्न कहाँ पाउनु र । उनीहरूले ब्याडदेखि धानको बीउका मुठा झुन्डयाउँदै रोप्ने मेलोसम्म पुर्‍याउन सघाउनुपथ्र्यो । घरको रोपाइँ पनि मैझारो भएकाले उनीहरू फुर्सदमा थिए । बुबाआमाचाहिँ पल्लाघरे बडाबाका घरको रोपाइँमा पर्म तिर्न जानुभएको थियो ।
जेष्ठ ६, २०७५
शनिबारको दिन थियो । बाबाले चिडियाखानामा थरीथरीका जनावर देखाउन लैजान्छु भन्नुभएको थियो त्यसैले उपासना दङ्ग थिइन् । बिहान उठेदेखि नै उनी फर्‍याकफुरुक गर्दै यताउता गरिरहेकी थिइन् । छिटोछिटो खाना खाएर निस्कने योजना भएकाले आमा भान्सामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । हजुरआमाको पूजापाठ सकिएको थिएन । त्यतिकैमा डोरबेल बजेको सुनेर बुवा ढोका खोल्न जानुभयो । ढोकामा नचिनेका मान्छे उभिएको देखेर उपासना आफ्नो कोठाभित्र पसिन् । बुवाले पाहुनालाई बैठक कोठामा लैजानुभयो । निकैबेर उहाँहरूको भलाकुसारी चल्यो ।
माघ २१, २०७४
आधा रातमा उपासनाका आँखा खुले । उनले सिरकबाट अलिकति टाउको निकालेर दायाँबायाँ हेरिन् । चारैतिर चकमन्न थियो । सडकमा बलेको बत्तीको अलिकति उज्यालो पसेकोले उनको कोठा पनि धमिलो देखिएको थियो । उनले हातले यताउता छामेर हेरिन् तर आमा भेटिनुभएन । उनको मुटु छिटोछिटो ढुकढुक भयो । उनी निदाउनुअघि त आमा कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । कहाँ जानुभएछ ?
जानुका खतिवडाका लेखहरु :
मंसिर २४, २०७४
काठमाडौंबाट फर्किएपछि रामु केही दिन कसैसँग बोलेनन् । जति बेला पनि उनी कुनै गहिरो सोचमा डुबेझैं देखिन्थे । सायद साथीहरूसँग पनि कम बोल्न थालेछन् क्यारे ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशीलता नभएकै हो त?
अमृत प्रसाद शर्मा असार ३०, २०७६
रौतहटको डुबान होस् या काठमाडौँमा आएको बाढी लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको पहिरोको घटनाका कारण भएको जनधनको क्षतिले देश अहिले आक्रान्त बनेको छ ।...
जति ब्याज उति बोझ
सम्पादकीय असार ३०, २०७६
सहरमा बस्ने, त्यसमा पनि धनीमानीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् । सहरबाट बिस्तारै ग्रामीण भेग, त्यसमा पनि झन् गरिबले ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट ऋण...
लज्जित शासन, दुःखी देश
अच्युत वाग्ले असार ३०, २०७६
देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैं दुःखी र लज्जित छन् । उनी अक्सर गलत सूचनाका आधारमा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यो अरुको आरोप होइन, उनी आफैंले...
मानो उठाउँदा नपोखियोस् मुरी
जीवन क्षत्री असार ३०, २०७६
केही समय अगाडि प्राज्ञ चैतन्य मिश्रसँग प्रसंगवश एउटा इमेल संवाद भयो । उहाँको चिन्ता थियो— ‘सञ्चार माध्यममा नकारात्मक कुरामात्रै किन यति धेरै छन् ? किन आशा र...
वीणा झा असार ३०, २०७६
सरकार बनेको डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो । बिभिन्न समयका अलोकप्रिय निर्णय, प्रभावकारी कारबाहीमा कमी र समाजप्रतिको असम्वेदनशीलताले सरकार बारम्बार विवादमा आइरहेको छ । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा...
बाढीमा चिन्तित छौं, चिन्तन गर्दैनौं
सुबोध ढकाल असार ३०, २०७६
दुई–तीन दिनको लगातार वर्षाका कारण हामीले बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति ब्यहोरेका छौं । जति क्षति भैराखेको छ र बाढी–पहिरोको जस्तो प्रकृति छ, त्यसले देखाइराखेको छ— यस्ता विपद्को मुख्य...
राज्यको दोहन, जनताको रोदन
सम्पादकीय असार २९, २०७६
पहिरो र बाढीले फेरि थुप्रै सर्वसाधारणको अनाहकमा ज्यान लिएको छ, कैयौंलाई घाइते बनाएको छ, सयौं परिवारलाई विस्थापित गरेको छ । मनसुनी वर्षासँगै प्रायः देशैभरि बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ ।...
के इन्टरनेटले लोकतन्त्र खाँदै छ ?
कृष्ण खनाल असार २९, २०७६
व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम...
सिद्धान्त समावेशी व्यवहार असमावेशी
शान्ता मरासिनी असार २९, २०७६
‘मेयर अर्थात पुरुषसँगै चुनाव जितेर आयौं तर म शरणर्थीजस्तै भएकी छु,’ यो भनाइ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङको हो । दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षकहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन क्षमता...
विप्लवी नेकपासँग बहिरंग संवाद
आहुति असार २९, २०७६
आधिकारिक र औपचारिक वार्ता प्रक्रिया थालनीमा उपेक्षा, असंवैधानिक रूपमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध, व्यापक रूपमा गिरफ्तारी र सर्लाही एवं भोजपुरमा सुनियोजित रूपमा मच्चाइएको हत्याकाण्डलाई मात्र पनि एक...